वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्रियाउने लक्ष्य छ–मन्त्री भट्टराई « Sajilokhabar
यो अभियानको नेतृत्वकर्ता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई २० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राखिएको भ्रमण वर्षको मुख्य तयारी र नीतिगत सुधारका काममा व्यस्त छन् । नेपाली राजनीतिमा आशा र भरोसा गरिएका युवा नेतामध्येका एक भट्टराई आफूले परीक्षाकै रुपमा मन्त्रालयको नेतृत्व लिइरहेको र आफ्नाबारेमा वस्तुगतरुपमा मूल्याङ्कन गरिदिन आग्रह गरे ।
मन्त्री एवं सत्तारुढ नेकपाका स्थायी कमिटीका सदस्य भट्टराईसँग नेपाल भ्रमण वर्षको तयारीलगायत मन्त्रालयको कार्यभारसँग सम्बन्धित विविध विषयमा प्रकाश सिलवाल र सिबी अधिकारीले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
सागका अवसरमा उद्घाटन र समापानका साथै खेलहरु हेर्न जाने क्रममा मेरो खेल क्षेत्रका अन्तरराष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधि, सेभ द मिसनसँग अनौपचारिक भेटघाट र कुराकानी भयो । उहाँहरु भ्रमण वर्षबारे जानकार नै हुनुहुँदो रहेछ । उहाँहरुको सद्भाव र समर्थन सम्पूर्णरुपमा हाम्रो नेपाल भ्रमण वर्षका लागि रहेको महसुस गरेँ ।
त्यसकारण हामीले भ्रमण वर्ष तयारी गरिरहँदा सागको नेपालमा आयोजना हुनु एक सुखद् संयोगमा रुपमा लिनुपर्छ । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् र नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीले पनि उहाँहरुलाई भ्रमण वर्षको तयारीबारे अवगत गराउनुभएको रहेछ । त्यो कुरा उहाँहरुको मन्तव्यमा पनि व्यक्त भयो । स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको समापन सम्बोधनमा यो विषय परेको थियो ।
भ्रमण वर्षको शुभारम्भ सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा जनवरी १ का दिन भव्य समारोहकाबीच हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन विश्व समुदायलाई विशेष आह्वान गर्नुहुनेछ । यसका लागि देशभित्रका सबै राजनीतिक दललाई हामी निमन्त्रणा गर्छौं । मन्त्रिगण, उच्च सरकारी अधिकारी, राज्यका सबै अङ्ग र निकाय, सुरक्षा निकाय प्रमुख र उच्च कर्मचारीका साथै उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक समुदायलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रलाई भ्रमण वर्षको समारोहमा निमन्त्रणा पठाउँछौँ ।
अन्तरर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि यसलाई भव्यता दिन हामीले विभिन्न देशका पर्यटनमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ । करिब ४० देशका पर्यटनमन्त्रीलाई हामीले निमन्त्रणा पठाएका छौँ र पाहुनाहरुको निरन्तर ‘फलोअप’ भइरहेको छ । कति देशका कस्ता विशिष्ट व्यक्ति आउनुहुन्छ भन्ने उहाँहरुको ‘कन्फरममेसन’ पछि हामी केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्छौैं । उद्घाटनकै लागि हामीले पर्यटन क्षेत्रसँग क्रियाशील विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सङ्घ संस्था, अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिसमेतलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ ।
निकट भविष्यमै भैरहवास्थित निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदैछ । एक वर्षपछि पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि निर्माण भइसक्छ । यहीबीचमा हामी बारामा निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको थालनीतिर धेरै सकारात्मक ढङ्गले अघि बढिसकेका छौँ ।
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सुदृढीकरण र विस्तारको काम पनि हामीले एक साथ अघि बढाउँदैछौँ । देशभरिका ५३ वटा आन्तरिक विमानस्थलको सेवा विस्तार र भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नतिका साथै सबै विमानस्थलाई व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने गरी लागिपरेका छौँ । अर्को पक्ष, पर्यटन गन्तव्यसम्म पुग्नका निम्ति सडक यातायातलाई व्यवस्थित, सहज र प्रभावकारी बनाउन लागिपरेका छौँ ।
काठमाडौँ नजिकका पर्यटकीय गन्तव्यमा जान असहज सडकमार्गको सुदृढीकरण तथा उपत्यकाको वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका कार्यक्रम पनि अघि बढाइनेछ । साथै, भ्रमण वर्षकै सिलसिलामा ‘काठमाडौँ भ्याली बाई नाइट’ कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दैछौँ । काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको दरबार क्षेत्रलाई बेलुका पनि भ्रमण तथा अवलोकन गर्न सक्ने गरी त्यसको लाइटिङको व्यवस्थालगायत सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेका छौँ ।
पर्यटनलाई राजधानीकेन्द्रित मात्रै गरिनुहुन्न र उपत्यका बाहिरका गन्तव्यको प्रभावकारी प्रवद्र्धनका निम्ति सरोकारवालासँग लगानी प्रवद्र्धनलगायतका विषयमा छलफल र पहलकदमी भएको छ । पछिल्लो समय म आफैँले पाँचवटा पाँचतारे होटल सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको छु ।
भ्रमण वर्षको तयारी पुगेन भन्ने कुरा स्वभाविक हो किन भने तयारी जति हुनुपर्ने थियो त्यति नभएको हुनसक्छ, तर केही पनि नभएको भने होइन । हामी अन्तरराष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यमा जाने र नेपालको कुरा राख्ने काम भएको छ ।
विदेशी सञ्चारमाध्यममा नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचारप्रसार भइनैराखेका छन् । देशभित्र पटकपटक हामीले निजी पर्यटन व्यवसायी र नीति निर्मातासँग अन्तरक्रिया गरेकै छौँ र प्रक्रिया अगाडि बढेकै छ, हो र यसमा सन्तुष्टि लिनु हुँदैन सन्तुष्टिले अगाडिको बाटो बन्द हुन्छ । त्यसैले तयारी जति हुनुपथ्र्यो, त्यति नभएको कुरालाई स्वीकार्दै अब भएका अपूर्णतालाई परिपूर्ति गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ ।
आगामी १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा हरेक वर्ष कम्तीमा ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको हालको ३ प्रतिशतबाट योगदानलाई १० प्रतिशत पु¥याउने र पर्यटन क्षेत्रमा हरेक वर्ष एक लाख ५० हजारदेखि दुई लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ ।
पर्याप्त पूर्वाधार विकास र पर्यटकलाई सेवा नदिइकन उनीहरु पैसा खर्च गर्न आउँदैनन् । त्यसका लागि सबै हिसाबले वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । त्यस कारण हामीले सन् २०२० लाई आधार वर्षका रुपमा लिएका हौँ । यसले हाम्रो आत्मविश्वास बढाउँछ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनका उच्च नेतृत्व तथा एशियाली मुलुकका विभिन्न उच्च पदाधिकारीको भेटले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा दूरगामी महत्व पनि राख्नेछ ।
युरोपेली आयोगले राखेको कालोसूची हटाउन, आइकाओको आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न र आवश्यक संवाद गर्न पनि हामी लागेका छौँ । सुरक्षित र सुरक्षामा हामी कुनै पनि सम्झौता नगरीकन नागरिक उड्डयनको कार्यक्षेत्रलाई प्रस्ट बनाउनेगरी आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा कानून पेस गर्दैछौँ ।
मङ्सिरमा शिलान्यास गर्ने मैले भनेको हुँ, त्यसका निम्ति पूर्वतयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । छिट्टै मनित्रपरिषद्को बैठकबाट पूर्वतयारीको कामको स्वीकृति लिएपछि शिलान्यासको कामको प्रक्रिया अघि बढ्छ । कुनै पनि नागरिक अदालतमा जान पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो ।
सम्मानित अदालतले नेपालको विकास र सरकारले अघि बढाएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को चाहनालाई सार्थक पुग्ने गरी विवेकसङ्गत ढङ्गले निर्णण गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र त्यहाँबाट हवाई उडान शुरु गर्ने समयावधि (सन् २०२० को मार्चभित्र) किटान गरेका छौँ, त्यही समयमै सकिनुपर्छ । यो धराशायी अवस्थामा रहेको आयोजनालाई हामीले यहाँसम्म ल्याएका छौँ । हामी यो देखाउन चाहन्छौँ कि नेपालमा ठूला आयोजना असफल छन्, समयमा सम्पन्न हुँदैनन् भन्नेलाई नेपालले ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने क्षमता राख्छ भन्ने सन्देश यही विमानस्थलबाटै प्रमाणित गर्न चाहन्छौँ ।
त्यहाँ मैले र मन्त्रालयका सचिवले स्थलगत अवलोकन गरी दैनिक प्रगति विवरण लिइरहेका छौँ, अहिले विमानस्थलको भौतिक प्रगति ९० प्रशितभन्दा माथि छ । मलाई विश्वास छ, हामी निर्धारित समयमै सञ्चालन गर्छौं । सञ्चालनको पूर्वतयारी पनि एकसाथ गरिरहेका छौँ । विमानस्थलको निर्माणसँगसँगै, भन्सार, अध्यागमन, इन्धन व्यवस्थापन आदिको काम टुङ्ग्याइसकेका छौँ ।
भ्रमण वर्षको महत्वलाई पनि ध्यान दिनैप¥यो । संस्कृतिको पक्ष ओझेलमा परेको भन्ने मलाई बारम्बार गुनासो आइरहेको छ । हामीले भ्रमण वर्ष मनाइरहँदा प्राकृतिकस्थल मात्र होइन सम्पदा प्रवद्र्धन तथा सांस्कृतिक पदमार्ग विकासको काम पनि अघि बढाइरहेका छौँ ।
यसबारे जुन मिडियामा समाचार आयो, म आफैँ छक्क परेको छु । यही मङ्सिर ९ गते प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको बैठकमा सम्पूर्ण मन्त्रालयको कामको बारेमा समीक्षा भएको थियो । त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको विवरणमा हाम्रो मन्त्रालयले त्यसअवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना जम्मा २९ वटामध्ये छ वटा सम्पन्न भएको र चालू १७ र शुरु भएका छ वटा रहेको प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यहाँ प्रस्तुत भएको तथ्याङ्कमा हाम्रो मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति पूँजीगत खर्च ४७ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । यो वार्षिक बजेटको १४ दशमलव ९ प्रतिशत हो ।
यो समाज र दुनियाँमा अनेक स्वार्थमा मानिस छन् । नहुने कुरा भएन । मुख्य कुरा हामीलाई राज्यले दिएको मिसन के हो ? हाम्रो संससद्बाट पारित भएको नीति, कार्यक्रम र बजेट के हो ? हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य के हो त्यसमा हिँड्नुपर्छ । स्वार्थ समूहसँग लड्नुपर्छ । त्यसको विकल्प छैन । न्यायोचितरुपमा अघि बढ्नुपर्छ । स्वार्थ समूहका प्रवृत्तिसँग डराएर रुँदै हिँड्नु हुँदैन ।
अर्का अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्रीको नियमित सम्पर्क र सूचना आदान प्रदान भइरहेको थाहा भएको छ । हामीमा कँही असझदारी छन् भने हटाउँदै लाने र आगामी निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा राम्रो परिणाम ल्याउने मिसनमा जानुपर्छ । मैले भन्ने गरेको छु कि अब निर्वाचनमा नेकपाले अक्षरमात्र बोकेर जाँदैन, अङ्कहरु पनि बोकेर जान्छ । हामीले यति र यति काम गरेका छौँ र अब योरयो गर्न हामीलाई मत चाहियो भन्नेछौँ ।रासस
भाइरसलाई लिएर राजनीति नगर्न ट्रम्पलाई डब्ल्यूएचओको चेतावनी
एजेन्सी, २७ चैत । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले लगातार दुईदिनसम्म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) विरुद्ध